Wasaarada Horumarinta Magaalooyinka, Dhismaha Iyo Warshadaha DDSI Oo Si Balaadhan Ugu Diyaar Garoowday Ka Qaybgalka Xuska Todobaadka Magaalooyinka Dalka - Cakaara News
Jigjiga(CN) Arbaco.29.Oct.2014, Wasiir kuxigeenka wasaarada horumarinta magaalooyinka, dhismaha iyo warshadaha DDSI mudane Axmed Shurgi Cabdi oo maanta xafiiskiisa ugu waramayay qaar kamid ah warbaahinta deegaanka ayaa sheegay in xafiiska iyo magaalooyinka waawayn ee deegaanku ay si meeqaam sare ah ugu diyaar garoobeen ka qaybgalka sanad guuradii 6aad ee xuska todobaadka magaalooyinka dalkeena Itoobiya oo sanadkan lagu qabandoona ismaamulka magaalada Diridhaba.
Wasiir ku xigeenku isaga oo ka waramaya ahmiyada ay leedahay xuska todobaadka magaalooyinka ayaa waxa uu yidhi” waxaan siwayn ugu diyaar garownay xuska todobaadka magaalooyinka oo markii 6aad lagu xusayo ismaamulka magaalada deridhaba waxaana xuskan iskugu yimaada dhamaan magaalooyinka waawayn ee dalka taasi oo ay isku waydaarsadaan fursadaha maalgashiga iyo dhaq dhaqaaqa ganacsi ee ka jira magaalooyinka dalka.
Isaga oo wasiir kuxigeenku hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in xuskaa ay ka soo qayb’galayaan ilaa 200 oo magaalo oo ka mid ah magaalooyinka waawayn ee dalkeena waxaana deegaankeena uga qayb galaya ilaa 10 magaala oo ay ay ugu horeeyaan 4 maamul magaalo.
Waxaa kale oo uu mudane Axmed si qoto dheer uga waramay guulaha horumarineed ee ay xukuumada deegaanku sanadihii ugu danbeeyay ka soo hoysay dhinaca horumarinta magaalooyinka DDSI.Taasi oo uu sheegay in xusaskii hore ee todobaadka magaalooyinka ay guulo waawayn ka soo hooyeen islamarkaana ay ka mid yihiin magaalooyinka deegaanku kuwo si xawliya ugu koraya dhinaca horumarka.
Ugu danbyabntii waxa uu sheegay wasiir kuxigeenku in hadda la dhamaystiray qaabkii ay magaalooyinkeenu uga qayb galilahaayeen xuskaasi iyada oo la dhisay gudayo kale duwan oo ah gudiyada qaban qaabada ka qaybgalka xuska todobaadka magaalooyinka oo 6 bisha Hidaar ee fooda inagu soo haysa ka dhicidoona ismaamulka magaalada Diridhaba.
Isku soo wada duud oo xukuumada deegaanka ayaa sanadihii ugu danbeeyay guulo waawayn ka soo hoysay hirgalinaya istaraatijiyada yoolka qarniga (MDG) ee ku taxaluqa horumarinta magaalooyinka iyo warshadaynta taasi oo kor u qaadaysa bilicda iyo adeeg bixinta magaalooyinka, iyadoo mudnaanta la siinayo adeegyada aas aasiga ah sida biyaha, laydhka, jidadka iyo tilifoonada, kuwaasi oo dhamantood la gaadhsiiyo heerka daboolka adeegbixinta.